विश्वभर १० लाखभन्दा बढि कम्प्यूटर जोखिममा, तपाईँको कम्प्यूटर पनि पर्यो की ? - Technology Khabar
» Microsoft » विश्वभर १० लाखभन्दा बढि कम्प्यूटर जोखिममा, तपाईँको कम्प्यूटर पनि पर्यो की ?
विश्वभर १० लाखभन्दा बढि कम्प्यूटर जोखिममा, तपाईँको कम्प्यूटर पनि पर्यो की ?
काठमाडौं । माइक्रोसफ्टले विश्वभरका १० लाख भन्दा बढि कम्प्यूटरहरु जोखिममा रहेको जानकारी दिएको छ । माइक्रोसफ्टले हालै एक ब्लग पोष्टमार्फत अझै १० लाख भन्दा बढि कम्प्यूटर सिस्टमहरु पुराना अपरेटिंग सिस्टममा संचालन भईरहेको र अपडेट नभएको हुँदा जोखिममा रहेको बताएको हो ।
यसअघि माइक्रोसफ्टले यहि महिनामात्र विण्डोज सेक्यूरिटीमा रिमोट कोड एक्जक्यूसन जोखिम देखिएको हुँदा सेक्यूरिटी प्याच अपडेट गरेको थियो । अहिले भने कम्पनीले विश्वभर पुराना अपरेटिंग सिस्टमहरु संचालनमा रहेको र नयाँ सिस्टममा अपडेट नगरिएको भन्दै साइबर आक्रमण जा मालवेयर अट्याक हुने चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
कम्पनीका इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स डाइरेक्टर सिमोन पपले १० लाख भन्दा बढि कम्प्यूटरहरु सिधै इन्टरनेटमा जोडिएका र ती कम्प्यूटरहरु जोखिमयुक्त भएको बताए ।
उनकाअनुसार अधिकरुपमा कर्पोरेट नेटवर्कमा रहेका कम्प्यूटरहरु पनि जोखिममा रहेका छन् । ती जोखिममा रहेका मध्ये एउटा मात्रै कम्प्यूटरले पनि मालवेयर वा भाइरस विश्वभर पुर्याउन सक्ने देखिएको उनले चेतावनी दिएका छन् ।
माइक्रोसफ्टकाअनुसार दुई साता अघि मात्र फिक्स रिलिज गरिएको र हालसम्म कुनैपनि जोखिम नदेखिएको बताईएको छ ।
कम्पनीले यसअघि वानाक्राई आक्रमण भएको अनुभवको बारेमा बताउँदै पुराना अपरेटिंग सिस्टम र सर्भर सिस्टमलाई अपडेट गर्न प्रयोगकर्ताहरुलाई भनेको छ ।
यदि तपाईँको पनि कम्प्यूटरमा पुरानो अपरेटिंग सिस्टम वा सर्भर सिस्टम प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने तत्काल त्यसलाई नयाँ अपरेटिंग सिस्टमद्धारा बदल्नुस् । नत्र ह्याकरहरुले तपाईँको कम्प्यूटरमा मालवेयर वा भाइरस पठाएर आक्रमण गर्ने र डाटा चोर्ने संभावना रहन्छ ।
विश्वभरका ३ करोड मानिसहरुको डेबिट र क्रेडिट कार्डको गोप्य जानकारी चोरी
सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रमा चुक्दै सरकार, पूरा भएनन् अधिकांश लक्ष्यहरु